Note 10+ နဲ့ P30 Pro..ဘယ် Flagship ဖုန်းပိုကောင်းသလဲ?
Galaxy Note 10+ နဲ့ P30 Pro…ဘယ်ဖုန်းက ပိုသာမလဲ?
Samsung ကနေ Galaxy Note 10 နဲ့ Note 10+ စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေကို မကြာသေးခင်တုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလောလောဆယ်မှာ Android Flagship ဖုန်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဖုန်းကို ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက် Samsung ရဲ့ Galaxy Note 10+ နဲ့ Huawei ကနေ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Huawei P30 Pro ဖုန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး ဒီစမတ်ဖုန်း ၂မျိုးအကြောင်းကို အနည်းငယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Huawei P30 Pro က Camera ပိုင်းနဲ့ Design ပိုင်းမှာ ဆုတွေဆက်တိုက်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ Android Flagship ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Galaxy Note 10+ ကတော့ လတ်တလောကမှ မိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ထဲကို သြဂုတ်လကုန်မှ ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ S Pen နဲ့ Display ပိုင်းကို ဦးစားပေးအဆင့်မြှင့်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါဆို ဒီ Huawei P30 Pro နဲ့ Samsung Galaxy Note 10+ တို့မှာ ဘယ်ဖုန်းက ပိုကောင်းတဲ့ Flagship ဖြစ်ပြီးတော့ Feature ပိုစုံမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်…
Flagship ဖုန်းတွေမှာ အဓိကအရေးအကြီးဆုံးက Camera ပိုင်းလို့ ပြောနိုင်ပြီးတော့ Note 10+ ရော၊ P30 Pro ဖုန်း ၂ မျိူးစလုံးမှာ Quad Back Camera တွေကို သုံးစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Huawei ကနေ တကယ့်နာမည်ကြီးဂျာမန် Camera Brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Leica နဲ့ ပူးပေါင်းထားပြီး 40 MP (Wide Angle Lens, f/1.6 aperture,OIS) + 20 MP (Ultra Wide Angle Lens, f/2.2 aperture) + 8 MP (Telephoto, f/3.4 aperture,OIS) Camera နဲ့ Depth-of-field Effect အတွက် ToF Camera ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Setup ကို P30 Pro မှာထည့်ထားတဲ့အတွက် ကင်မရာပိုင်းမှာ ချီးကျူးမှုတွေကို ဆက်တိုက်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy Note 10+ မှာတော့ 12 MP (Wide Angle Lens, Dual aperture f/1.5-2.4, Dual Pixel PDAF, OIS) + 12 MP (Telephoto, f/2.1 aperture, OIS) + 16 MP (Ultra Wide Angle Lens, f/2.2 aperture) နဲ့ ToF DepthVision Camera ကို Depth-of-field ထက် AR ပိုင်းတွေမှာပဲ အဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Camera ပိုင်းမှာ Note 10+ လည်း Night Mode လို Feature ပါတယ်ဆိုပေမယ့် P30 Pro ရဲ့ 50x Digital Zoom နဲ့ Super Low Light Feature တွေကိုတော့ မယှဉ်နိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ ကျန်တဲ့အပိုင်း ရလဒ်တွေကိုတော့ Reviewer တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်နဲ့ DxOMark အမှတ်တွေကို စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Camera လို့ပြောလိုက်ရင် Back Camera ကလည်း အရေးကြီးသလိုပဲ Social Media တွေမှာ အမြဲပုံတွေတင်ဖို့အတွက် Selfie Camera ကလည်း ကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ Note 10+ ရော၊ P30 Pro ဖုန်း ၂ မျိုးစလုံးက Single Selfie Camera ကိုပဲ အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် P30 Pro ရဲ့ 32MP Selfie Camera က Note 10+ ရဲ့ 10MP ထက် ပိုပြီး Details ကောင်းတဲ့ ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်သလို P30 Pro ရဲ့ f/2.0 Aperture က Note 10+ ရဲ့ f2.2 Aperture ထက် Low Light Selfie တွေမှာလည်း ပိုကောင်းနေဦးမှာပါ။
Display အပိုင်းမှာတော့ Samsung Galaxy Note 10+ က Resolution 1440 x 3040 pixels ရှိတဲ့ Dynamic AMOLED Display ကို အသုံးပြုထားပြီး Huawei P30 Pro က Resolution 1080 x 2340 pixels ရှိတဲ့ OLED Display ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Galaxy Note 10+ က ခြေတလှမ်းသာသွားပြီလို့ ပြောရမှာပါ။
Battery ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပမာဏအရ Note 10+ မှာ 4300mAh နဲ့ P30 Pro မှာ 4200mAh ပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် တူတူနီးပါးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အားအမြန်ဘယ်သူပိုသွင်းနိုင်လဲဆိုတာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Note 10+ မှာ 45W Fast Charge နဲ့ P30 Pro မှာ 40W Huawei SuperCharge စနစ်တွေကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အပြင်ပန်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင် Note 10+ က အနည်းငယ်သာနေတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Samsung က Note 10+ ကို 45W Charger နဲ့ အားသွင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့်လည်း ဘူးထဲမှာ 25W Charger ကိုပဲ ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီ 45W နဲ့ အားသွင်းနိုင်တယ်ဆိုတာက ဖုန်းတန်ဖိုးအပြင် နောက်ထပ် ဈေးထပ်ပေးပြီး ဝယ်ယူရဦးမှာပါ။
Samsung Galaxy Note 10+ ထွက်တုန်းက ဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်သံအချို့ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Note 10+ နဲ့ နှစ်အစပိုင်းထဲက ထွက်ထားတဲ့ P30 Pro ဖုန်းတွေကို Logo မပါပဲ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Note 10+ ရဲ့ နောက်ဖက် ကင်မရာထားတဲ့ပုံစံနဲ့ Gradient Design က P30 Pro နဲ့ တော်တော်လေးကို တူညီနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဖုန်း ၂မျိူးစလုံးက တကယ့် Flagship Premium Feeling ကို ပြန်ပေးနိုင်မှာပါ။
P30 Pro မှာ သုံးထားတဲ့ Kirin 980 Processor ဟာ မနှစ်ကတည်းက 7nm Architecture နဲ့ ထွက်ရှိထားတဲ့ Processor ဖြစ်သလို စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ AI ပိုင်းတွေမှာလည်း ရလဒ်ကောင်းတွေကို ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Galaxy Note 10+ က အခုမှ 7nm Architecture ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Exynos 9825 Processor အသစ်ကို Upgrade လုပ်လာတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် Kirin 980 Processor နဲ့ Exynos 9825 Processor တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကွာခြားချက်တွေကို အတိအကျ သိဖို့ဆိုရင်တော့ Benchmark ရလဒ်တွေနဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝထဲက အသုံးဝင်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ P30 Pro မှာ 3.5mm Audio Jack မပါဝင်ပဲ USB-C Audio ကို ပြောင်းလဲသွားသလိုမျိုး Note 10+ မှာလည်း 3.5mm Audio Jack ကို မပါတော့ပါဘူး။
လက်ရှိဈေးနှုန်းတွေအရ Huawei P30 Pro ကို ငွေကျပ် ၁,၄၉၉,၀၀၀ နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Samsung Galaxy Note 10+ ကို ငွေကျပ် ၁,၆၉၉,၀၀၀ နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei P30 Pro အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် ဒီလင့် ကို နှိပ်ပါ။
Samsung ကနေ Galaxy Note 10 နဲ့ Note 10+ စမတျဖုနျးအသဈတှကေို မကွာသေးခငျတုနျးက မိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ အခုလောလောဆယျမှာ Android Flagship ဖုနျးတှထေဲမှာ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ဖုနျးကို ရှာနတေဲ့သူတှအေတှကျ Samsung ရဲ့ Galaxy Note 10+ နဲ့ Huawei ကနေ ယခုနှဈအစောပိုငျးထဲက မိတျဆကျခဲ့တာဖွဈပမေယျ့လညျး စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားနဆေဲဖွဈတဲ့ Huawei P30 Pro ဖုနျးတှကေို နှိုငျးယှဉျပေးလိုကျပါတယျ။
အရငျဆုံးဒီ စမတျဖုနျး ၂ မြိုးအကွောငျးကို အနညျးငယျပွောရမယျဆိုရငျ Huawei P30 Pro ဖုနျးက Camera ပိုငျးနဲ့ Design ပိုငျးမှာ ဆုတှလေညျး ဆကျတိုကျကိုရရှိနတေဲ့ အောငျမွငျတဲ့ Android Flagship ဖုနျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ Samsung Galaxy Note 10+ ကတော့ လတျတလောကမှ မိတျဆကျထားတာဖွဈပွီးတော့ ဈေးကှကျထဲကို သွဂုတျလကုနျမှ ဝငျရောကျလာမှာဖွဈပွီးတော့ S Pen နဲ့ Display ပိုငျးကို ဦးစားပေးအဆငျ့မွှငျ့တငျထားတာဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒါဆို ဒီ Huawei P30 Pro နဲ့ Samsung Galaxy Note 10+ ဖုနျး ၂ က ဘယျတဈခုက ပိုကောငျးတဲ့ Flagship ဖုနျးဖွဈပွီးတော့ Feature ပိုစုံမလဲဆိုတာကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ…။
Flagship ဖုနျးတှမှော အဓိကအရေးအကွီးဆုံးက Camera ပိုငျးလို့ ပွောနိုငျပွီးတော့ Note 10+ ရော၊ P30 Pro ဖုနျး ၂ ခုစလုံးမှာ Quad Back Camera တှကေို သုံးစှဲထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောမှာကတော့ Huawei ကနေ တကယျ့နာမညျကွီးဂြာမနျ Camera Brand တဈခုဖွဈတဲ့ Leica နဲ့ ပူးပေါငျးထားတဲ့ 40+20+8MP Camera နဲ့ Depth-of-field Effect အတှကျ ToF Camera ပေါငျးစပျထားတဲ့ Setup ကို P30 Pro မှာထညျ့ထားတဲ့အတှကျ တကယျကို ကငျမရာပိုငျးမှာ ခြီးကြူးမှုတှကေို ဆကျတိုကျရရှိနတောဖွဈပါတယျ။
တဖကျမှာတော့ Samsung Galaxy Note 10+ မှာ 12+12+16MP Camera နဲ့ ToF DepthVision Camera ကိုလညျး Depth-of-Field ထကျ AR ပိုငျးတှမှောပဲ အဓိကအသုံးပွုတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ Camera ပိုငျးမှာကတော့ Note 10+ လညျး Night Mode လို Feature ပါတယျဆိုပမေယျ့ P30 Pro ရဲ့ 50x Zoom နဲ့ Super Low Light Feature တှကေိုတော့ မယှဉျနိုငျတာ အမှနျပါပဲ။
Camera လို့ပွောလိုကျရငျ Back Camera ကလညျး အရေးကွီးသလိုပဲ Social Media တှမှော အမွဲပုံတှတေငျဖို့အတှကျ Selfie Camera ကလညျး ကောငျးမှနျဖို့လိုအပျပါသေးတယျ။
ဒီနရောမှာတော့ Note 10+ ရော၊ P30 Pro ဖုနျး ၂ မြိုးစလုံးက Single Selfie Camera ကိုပဲ အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနရောမှာလညျး P30 Pro ရဲ့ 32MP Selfie Camera က Note 10+ ရဲ့ 10MP ထကျ ပိုပွီး Details ကောငျးတဲ့ ပုံတှရေိုကျကူးနိုငျသလို P30 Pro ရဲ့ f1.9 Aperture က Note 10+ ရဲ့ f2.2. Aperture ထကျ Low Light Selfie တှမှောလညျး ပိုကောငျးနဦေးမှာပါ။
Display အပိုငျးမှာတော့ Samsung Galaxy Note 10+ က Resolution 1440 x 3040 pixels ရှိတဲ့ Dynamic AMOLED Display ကို အသုံးပွုထားပွီး Huawei P30 Pro က Resolution 1080 x 2340 pixels ရှိတဲ့ OLED Display ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ဒီနရောမှာတော့ Galaxy Note 10+ က ခွတေလှမျးသာသှားပွီလို့ ပွောရမှာပါ။
Battery ကိုကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး ပမာဏအရ Note 10+ မှာ 4300mAh နဲ့ P30 Pro မှာ 4200mAh ပါဝငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျ တူတူနီးပါးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ အားအမွနျဘယျသူပိုသှငျးနိုငျလဲဆိုတာကို ကွညျ့မယျဆိုရငျလညျး Note 10+ မှာ 45W Fast Charge နဲ့ P30 Pro မှာ 40W Huawei SuperCharge စနဈတှကေို အသုံးပွုထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ အပွငျပနျးအရကွညျ့မယျဆိုရငျ Note 10+ က အနညျးငယျသာနသေလိုရှိနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သခြောကွညျ့မယျဆိုရငျ Samsung က Note 10+ ကို 45W Charger နဲ့ အားသှငျးနိုငျတယျလို့ ဆိုထားပမေယျ့လညျး ဖုနျးဝယျယူတဲ့အခြိနျမှာ ဘူးထဲမှာ 25W Charger ကိုပဲ ထညျ့ပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဒီ 45W နဲ့ အားသှငျးနိုငျတယျဆိုတာက ဖုနျးတနျဖိုးအပွငျ နောကျထပျ ဈေးထပျပေးပွီး ဝယျယူရဦးမှာပါ။ ဒီနရောမှာတော့ P30 Pro ရဲ့ 40W SuperCharge Charger က ဘူးထဲမှာပါပွီးဖွဈတဲ့အတှကျ ပိုကျဆံထပျကုနျစမှောမဟုတျပါဘူး။
ဒါ့အပွငျ Samsung အနနေဲ့ ဒီလိုမြိုး ဘူးထဲမှာ 25W Charger ပဲထညျ့ပေးထားတာက Note 10+ ကို 45W Charger နဲ့ အားသှငျးမယျဆိုရငျ Safe ဖွဈနိုငျပါ့မလားဆိုတာကလညျး စိုးရိမျစရာပါ။ Samsung Galaxy Note Series ဖုနျးတှကေ Note7တုနျးကလညျး Battery Capacity တိုးလိုကျတဲ့အတှကျ ပေါကျကှဲမှုတှဖွေဈပှားခဲ့တာကိုလညျး သတိထားဖို့ လိုအပျမှာပါ။
Samsung Galaxy Note 10+ ထှကျတုနျးက ဒီဇိုငျးပိုငျးနဲ့ ပတျသတျပွီး ဝဖေနျသံအခြို့ကို ကွားဖူးပါသလား? ဒီ Note 10+ နဲ့ နှဈအစပိုငျးထဲက ထှကျထားတဲ့ P30 Pro ဖုနျးတှကေို Logo မပါပဲ နှိုငျးယှဉျကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ Note 10+ ရဲ့ နောကျဖကျ ကငျမရာထားတဲ့ပုံစံနဲ့ Gradient Design က P30 Pro နဲ့ တျောတျောလေးကို တူညီနတောပါ။
အခုလိုမြိုး Note 10+ က P30 Pro ရဲ့ ဒီဇိုငျးကို ယူထားတယျလို့ပွောလို့ရပမေယျ့လညျး ဒီဖုနျး ၂ ခုစလုံးက တကယျ့ Flagship Premium Feeling ကို ပွနျပေးနိုငျမှာပါ။ ဒီနရောမှာတော့ P30 Pro က ထှကျရှိခဲ့တာအခြိနျကွာပွီဖွဈတဲ့အတှကျ Note 10+ ထကျ ဈေးသကျသာတဲ့အတှကျ ပိုတောငျ တနျတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Samsung Galaxy Note 10+ က ဒီတဈခေါကျမှာတော့ အခုမှ 7nm Architecture ကို အသုံးပွုထားတဲ့ Exynos 9825 Processor အသဈကို Upgrade လုပျထားခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့ P30 Pro မှာ သုံးထားတဲ့ Kirin 980 Processor က မနှဈထဲက 7nm Architecture နဲ့ ထှကျရှိထားတဲ့ Processor ဖွဈသလို စှမျးဆောငျရညျပိုငျးနဲ့ AI ပိုငျးတှမှောလညျး လုံးဝအကောငျးစားရလဒျတှကေို ရရှိထားတာဖွဈပါတယျ။
ဒါတငျလညျး မဟုတျသေးပါဘူး။ P30 Pro မှာ 3.5mm Audio Jack မပါဝငျပဲ USB-C Audio ကို ပွောငျးလဲသှားသလိုမြိုးပဲ Note 10+ မှာလညျး စပွီးတော့ Samsung ကနေ 3.5mm Audio Jack ကို ဖွုတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါက တိုကျဆိုငျမှုလို့ပွောဖို့ကွတော့ တျောတျောယုံရခကျဖွဈနပေါတယျ။
ဈေးနှုနျးအနနေဲ့တော့ လကျရှိအနနေဲ့ Huawei P30 Pro ကို ငှကေပျြ ၁,၄၉၉,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ဝယျယူနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ Samsung Galaxy Note 10+ ရဲ့ ဈေးက ၁,၆၉၉,၀၀၀ ကပျြကနေ စတငျမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အသဈဈေးမှာတငျ ၂ သိနျးကှာနပွေီးတော့ P30 Pro က ထှကျထားတာလညျး ကွာပွီဆိုတော့ အနညျးငယျအသုံးပွုထားတဲ့ ဖုနျးတှကေို ဒီထကျပိုသကျသာတဲ့ဈေးနဲ့တောငျဝယျယူနိုငျဦးမှာပါ။
အဲ့ဒါဆိုရငျ ပရိသတျကွီးအနနေဲ့ကရော ဒီ Flagship ဖုနျး ၂ ခုမှာ ဘယျဖုနျးကို ရှေးခယျြမလဲဆိုတာကို Comment ပေးခဲ့သှားပါဦး။
Huawei P30 Pro အကွောငျး ပိုမိုလလေ့ာရနျ ဒီလငျ့ ကို နှိပျပါ။
MyTech Myanmar2019-08-13T14:54:03+06:30August 9th, 2019|Huawei, Mobile Phones|